January 22, 2022 – ဝင်းမေတ္တာ
ညနေ (၂၃၀) – မောဟစရိုက်ရှိသူတို့အတွက်ကျင့်နည်း အပိုင်း(၂)
ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၃၀) မဟာသမယသုတ်များ မောဟစရိုက်ရှိသူတို့အတွက်ကျင့်နည်း အပိုင်း(၂) (မဟာဗျူဟသုတ် ၊ သုတ္တနိပါတ်၊ ၄၁၈) အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ ဘယ်အရာဖြစ်ပေါ်၍ လောကသည် ဖြစ်ပေါ်နေပါသလဲ ? ဘယ်အရာ၌ ပေါင်းဖေါ်ခြင်းကို ပြုပါသလဲ? ဘယ်အရာကို အကြောင်းပြု၍ လောကသည် ဖြစ်ပေါ်ပါသလဲ? ဘယ်အရာသည် လောကကို နှိပ်ဆက်အပ်ပါသလဲ? နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ မဟာသမယသုတ်များ သင်တန်းနှင့် မှတ်စု
နံနက် (၁၈၅) – ကံလမ်းစဥ်
တရားလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်း (၁၈၅) နံနက် သီလခံယူ, ဘုရားဝတ်ပြု, အလုပ်ပေးတရား စိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အပိုင်း (၈) ကံအကျိုးပေး ထူးခြားဆန်းကြယ်ခြင်း ကံလမ်းစဥ် နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ စိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သင်တန်းနှင့် မှတ်စု